Fonon-tanana fanadinana Nitrile, Saron-tava ambongadiny, akanjo mitokana - Jinlian
Jinlian Medical, mpamatsy azo atokisana Fitaovana fisorohana ny valanaretina
Mifandraisa aminay izao mba hiaraha-misoroka ny valanaretina!Mandehana
Jiangsu Jinlian Medical Technology Co., Ltd. Izahay dia mamokatra sy mivarotra fonon-tanana fanadinana nitrile fitsaboana (tsy misy vovoka) fonon-tànana fanadinana nitrile. Manana fahaiza-manao famokarana matanjaka sy vidin'ny fifaninanana izahay, noho izany manome antoka ny fandefasana ara-potoana izahay. Manaraka ny fehezan-kevitry ny orinasa isika hoe: "ny kalitao dia fiainana; fanatsarana hatrany ny serivisy ho fiantohana; mpanjifa aloha, mandresy ". Izahay dia manao izay tsara indrindra vitantsika mba hanomezana vokatra sy kilasy kilasy voalohany. Manerana an'izao tontolo izao, azonao atao ny matoky ny fahaizantsika ary afaka manome anao vokatra mahavoky ianao.
Izahay dia manao izay tsara indrindra vitantsika amin'ny fanomezana vokatra kilasy voalohany sy serivisy voalohany. Izahay dia mikendry ny hankafizanao ny fitafianao, hankafizanao ny fiandrasanao.
Saron-tava tarehy N95 Cup
Akanjo insolation azo alefa
Ny fonon-tànana Nitrile no fonon-tànana miaro tena azo ampiasaina Iray amin'ireo orinasa vitsy dia vitsy any Shina izay afaka mamokatra fonon-tànana grady ara-pitsaboana amin'ny isan-jato avo lenta Ny vokatra be mpampiasa amin'ny ho avy izay eken'ny tsena, ny solon'izay mety indrindra amin'ny fonon-tànana lateks.
Goldlink dia nahazo ny fanamarinana ofisialy CE sy ny fanamarinana FDA, nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny andrim-pitsaboana iraisam-pirenena. Izy io koa dia maneho ny fanoloran-tenantsika ho an'ny mpanjifa. Tsindrio raha hijery ny taratasinay
Ny tombony amin'ny famokarana dia afaka manampy amin'ny fanatanterahana ny baiko mividy volabe, manome anao lozisialy famonosana famokarana tonga lafatra sy serivisy hafa.
Mampanantena ny Jinlian Medical fa hanome ny antoka tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra na inona na inona fatra, satria manana orinasa mpamokatra maoderina sy fitehirizana ary fitaterana ary fitaterana izahay.
Manomboka amin'ny fisafidianana ireo mpamatsy akora tsara indrindra, Jinlian dia mitam-piadiana tanteraka manomboka amin'ny milina ka hatramin'ny mpiasa. Jinlian dia mino fa ny fizotry ny famokarana henjana sy ny mpiasa falifaly sy falifaly ihany no ahazoana antoka fa manaraka ny fenitra ny vokatra rehetra an'ny mpanjifanay.
Ny vokatra Jinlian Medical dia azo atolotra amin'ny firenena na faritra satria nandalo ny fanamarinana CE sy FDA izahay, izay midika koa fa azo itokisana ny vokatray.
Na mialoha na aorian'ny fiaraha-miasa, alohan'ny na aorian'ny fanaterana, ny ekipanao manokan-tena dia hanompo anao 24 ora isan'andro, ary ny olana rehetra dia hovahana aloha.
vaksiny fanefitra covid19
avy amin'ny adminAug-03-2021
Inona no mahasamihafa ny fonon-tànana nitrile sy ny latex g ...
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fonon-tànana nitrile sy fonon-tànana latina dia miankina indrindra amin'ny akora samihafa sy ireo fananana miaro amin'ny vokatra samihafa. Ao anatin'ny tontolo manokana dia efa ...
avy amin'ny adminJul-05-2021
Inona no maha samy hafa ny "fonon-tànana nitrile, PVC ...
Satria ny fonon-tanana azo ampiasaina dia azo zaraina ho fonon-tànana vita amin'ny fingotra nitrile, fonon-tànana PVC ary fonon-tànana latina voajanahary araka ny fitaovana. Ka inona no mahasamihafa azy ireo? A, tsy mitovy ny fitaovana ...
Ny vokatry ny fahamendrehan'ny bobongolo amin'ny mpamokatra ...
Niely be erak'izao tontolo izao ny coronavirus vaovao, nisy ny fitaky ny fitaovam-piarovana, indrindra ny saron-tava fiarovana sy fonon-tanana vita amin'ny voajanahary. Toy ny iray o ...